Apple tv - iPhone News | Vaovao IPhone
Apple TV no famenony tonga lafatra amin'ny iPad ary iPad Mini. Mifandray amin'ny fahitalavitra na stereo antsika ity fitaovana ity handefasana ny atiny multimedia tsy misy tariby.
Ny Apple TV dia miaraka amina kinova iOS navaozina izay miaraka amin'ny protokoleta AirPlay, mamela antsika hankafy ireo fiasa toa ny horonan-tsary fitaratra, tonga lafatra ho an'ny mamerina ny atin'ny efijery iPad amin'ny fahitalavitra misy antsika HD feno. Ilaina indrindra ity endri-javatra ity amin'ny fizarana antontan-taratasy any am-pivoriana, hijerena horonantsary, sarimihetsika, na hilalaovana lalao avy amin'ny App Store ary hampiasaina iPad ho fifaliana.
Fitaovana miaraka amin'ny mpanera Apple A5, Boaty ambony napetrak'i Apple dia manome refy mampihomehy, 9,8 x 9,8 x 2,3 centimetatra ihany no milanja 270 grama.
Ny tsara indrindra, ny Vidin'ny Apple TV 99 euro fotsiny io.
Fanaovan-tsonia vaovao ho an'ny Apple TV + amin'ity Jessie Henderson an'ny WarnerMedia
ny Jordi Gimenez hace 1 andro .
Mety tsy mety aminao ny anaran'i Jessie Henderson, saingy izy no filoha lefitra taloha an'ny WarnerMedia. Ao amin'ity…
Nohavaozina nandritra ny vanim-potoana fahatelo ny Cycle comedy anglisy
ny Ignacio Sala hace 1 herinandro .
Raha miresaka hatsikana amin'ny Apple TV + isika, dia tsy isalasalana fa tsy maintsy hiresaka momba an'i Ted Lasso, andiany nahazo loka indrindra tamin'ny serivisy ...
Ny famantarana vaovao dia manamarina fa miasa amin'ny baiko vaovao ho an'ny Apple TV i Apple
Betsaka ny tsaho fa manodidina ny Apple TV tato ho ato dia fitaovana iray izay ...
Ny hatsikana Apple TV + ho avy dia kintana Maya Rudolph
ny Ignacio Sala hace Herinandro 3 .
Saika isan-kerinandro dia misy vaovao mifandraika amin'ny serivisy video streaming an'i Apple. Rehefa tsy ...
Hanolotra ireo boky novakin'i Oprah Winfrey izao i Siri
ny Karim Hmeidan hace Herinandro 3 .
Betsaka aminareo no hahafantatra ny anaran'i Oprah Winfrey, ilay mpanao gazety amerikana fanta-daza izay andro vitsivitsy lasa izay dia izy ...
Greyhound sy Wolfwalkers dia manome ny fanendrena an'i Oscar voalohany an'i Apple
ny Ignacio Sala hace Herinandro 4 .
Iray amin'ireo hetahetana nananan'i Apple hatrizay nanolorany ny serivisy horonantsary mivantana tao ...
Apple TV + handefa premiere fanadihadiana momba ny doka Pepsi tamin'ny taona 90
Raha nanambara ny sehatry ny horonantsary mivantana i Apple, amin'ny Apple TV + dia tsy afaka mahita andian-dahatsoratra sy ...
ny Karim Hmeidan hace 1 volana .
Miaraka amin'ny masonay izay napetraka tamin'ny Keynote ho an'ny 23 martsa, manohy mamakafaka ireo fanambarana ofisialin'ny ...
Ray Liotta dia manatevin-daharana ireo mpilalao ao amin'ny Apple TV + "In With The Devil"
Ilay kintana lehibe farany izay ho anisan'ny mpilalao ao amin'ny andiany manaraka izay ahitan'i Apple ...
Nahazo loka telo vaovao ho an'ny Apple TV + ny andiany Ted Lasso
Efa niresaka nandritra ny herinandro maromaro izahay momba ny isan'ny fanolorana anarana natolotry ny hatsikana Ted Lasso, izany hoe ...
Apple TV + dia nanambara fifanarahana an-taonany maro amin'ilay tanora mpikatroka Malala Yousafzai
ny Angel Gonzalez hace 1 volana .
Ny serivisy votoaty audiovisual streaming an'ny Big Apple, Apple TV +, dia tafavoaka velona noho ny fampiroboroboana sy ny famoronana ...
Ahoana no mampifandray ny iPhone amin'ny fahitalavitra
Ahoana ny fametrahana Safari amin'ny Apple TV
Ahoana ny fomba hanehoana sary sy horonan-tsary amin'ny fahitalavitra Smart tsy misy Apple TV avy amin'ny iPad amin'ny iMediaShare